Waa maxay software -ka maareynta makhaayadda ugu weyn? | Wararka Gadget
Qolka Ignatius | | Aplicaciones
Markay timaaddo maareynta meherad, haddii aynaan doonayn inaynu ku luminno waraaqaha, sharraxaadda iyo wixii la mid ah, waxa ugu fiican ee aannu samayn karnaa waaadeegso softiweer diirada saaraya meheradda, softiweer oo ina caawin doona maahan oo kaliya maalin walba, laakiin sidoo kale markay tahay ogaanshaha faa iidada ganacsiga, diyaarinta canshuuraha, ogaanshaha mar walba saamiyada, dakhliga, lacag bixinta ...
Haddii, marka lagu daro, ay tahay meherad leh alaab aad u tiro badan, sida makhaayad, arrimuhu aad bay u murugsan yihiin, maadaama shaqaalaha iyo annaga labadaba waa inaan ogaano qiimaha mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah adeegyada aan bixinno. Xalka dhibaatadan waa in la isticmaalo a software maaraynta makhaayadda.
Codsiyadaani waxay noo oggolaanayaan inaan abuurno liisaska dhammaan badeecadaha iyo / ama adeegyada aan bixinno oo ay la socdaan qiimahooda, si qofka mas'uulka ka ah lacag -bixinta, uu si fudud ugu dhex mari karo arjiga si uu u tago dhalinta dhammaan adeegyada macaamiisha sida aad ugu adeegto ama si toos ah marka amarrada la bixiyo, haddii dalabka uu la jaan qaadayo aaladaha gacanta ama kiniiniyada.
Haddii aad u malaynayso in la gaadhay waqtigii la qaddarin lahaa meheraddaada cuntada, ha ahaato baar, makhaayad, kafateeriya, makhaayad laga soo saaro ... markaa waxaan ku tusi doonaa barnaamijyada maaraynta makhaayadda ee ugu fiican.
2 Bar Doscar
3 Soo dhaweynta Glop POS
4 Nasashada Hore ee ICG
Mid ka mid ah kuwa ugu fiican software maaraynta makhaayadda Waxaan ka helnay OfiBarman. Waad ku mahadsan tahay codsigan waan awoodnaa maaree dhammaan baahiyaha baararka, qolalka jalaatada, pizzerias, baararka, naadiyada, makhaayadaha, kafateeriyada... laga bilaabo xakamaynta saamiyada ilaa iibinta, bixinta alaab -qeybiyeyaasha, miiska shaqada, iibinta sugayayaasha ...
Intaa waxaa dheer, iyada oo loo marayo arjiga OfiComanda, sugeyaasha ayaa fulin kara si toos ah uga dalbo taleefanka gacanta ama kiniiniga u dirista amarrada jikada iyada oo loo marayo daabacaha iyo dalabka OfiBarman ee maareynta aruurinta dambe.
OfiBarman ayaa leh in ka badan 2.550 rakibayaal labadaba gudaha Spain iyo Mexico, Peru, Panama, Dominican Republic oo ay ka mid yihiin franchise -ka maqaaxiyaha iyo maqaayadaha, hoteellada, meelaha lagu caweeyo ... Kuwa aan qorshaysan inay lacag badan ku qaataan bilowga hore, barnaamijkan waxaa laga heli karaa laba siyaabood oo kala duwan: iibsashada ama bixinta halkii isticmaalka.
Ikhtiyaar kale oo xiiso leh oo lagu maareeyo meheradda makhaayadda ayaa laga heli karaa dalabka Bar Doscar. si sahlan loo baran karo, waxaan maamuli karnaa ganacsi kasta oo marti -gelin ah.
Codsigu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad xakameyso isbeddellada sugayayaasha, xaddid furitaanka sanduuqa shaqaalaha qaarkood, abuuro oo wax ka beddesho kaydka bakhaarka, soo saar summadaha daabacaadda oo leh barcode, soo saarid qiyaaso, qaansheegyada proforma ... marka lagu daro dhoofinta warbixinnada qaab .pdf, .xlsx iyo .docx ah.
Sida codsi wanaagsan oo qiimihiisu yahay milixdiisa, waxay noo oggolaanaysaa inaan abuurno a khariidada miisaska ganacsiga halkaas oo aad ku biiriso mid kasta oo ka mid ah amarada, u dir amarrada daabacaha sida loo sameeyay, ku dar nidaamka meelaynta, daabac tiro badan oo warbixinno ah nooc kasta ...
Soo dhaweynta Glop POS
Soo -dhoweynta Glop POS waa madal lagu maareeyo meheradaha martigelinta ee noo oggolaanaya la shaqee aaladaha gudbinta cuntada sida Glovo, Just Eat, Deliveroo kuwa kale, maadaama ay noo oggolaanayso inaan isku -darno amarada ka socda mareegahayaga iyo aaladahaan.
Codsigaan, waxaan ku ogaan karnaa mar walba xaaladda diyaarinta suxuunta iyo waqtiga u haray ilaa uu ka baxo jikada. Tani waa suurtogal iyada oo ay ugu wacan tahay kormeeraha jikada, oo ah codsi aan ku rakibi karno kiniin ama taleefan gacmeed halkaas oo cunto -kariyeyaashu ay calaamadiyaan suxuunta marka la diyaariyo, sidaas darteedna loogu wargeliyo sugeyaha inuu u dhiibo macaamiisha.
Iyada oo loo marayo dalabka aaladaha mobilada iyo kiniiniyada, waardiyeyaashu waxay u samayn karaan amar kasta jikada, oo ay ku jiraan waxyaabo dheeri ah ama ka saarida alaabta suxuunta marka lagu daro ku dar faallooyin dheeraad ah jikada si ay u diyaariyaan saxanka si uun ama si kale.
Nasashada Hore ee ICG
ICQ Front Rest waxaa loogu talagalay maamulaan ganacsi kasta oo marti -gelin ahLaga soo bilaabo xarumo yaryar ilaa xayeysiisyo waaweyn, oo leh is-dhexgal aad u fudud in la isticmaalo, waxay u oggolaanaysaa sugeyaasha inay amarro ka soo qaataan taleefanka casriga ah oo ay u diraan jikada si ay isugu diyaariyaan.
Waxay kaloo noo ogolaataa maamulo deggenaanshaha miiska, abuuraan feylasha wax soo saarka, maareeyaan kaydka, samee boos celin iyo sidoo kale, waxay sidoo kale la jaan qaadi kartaa amarrada mareegaha ganacsiga.
Si ka duwan codsiyada kale, waan awoodnaa u yeel digniinta xaaladaha qaarkood sida kaydka oo yaraada, shaqaalaha aan imaan goobtooda shaqo, marka xiritaanka lacag caddaan ah la sameeyo… Codsigan waxaa loogu talagalay franchises inta badan maadaama ay oggolaanayso in dhammaan xarumaha laga maamulo meel fog meel keliya.
Loyverse waa codsi u oggolaanaya u rog taleefanka casriga ah ama kiniiniga POS, iyada oo aan loo eegin haddii ay tahay aasaas yar ama bakhaarro badan oo qaab xayeysiis ah iyo in laga heli karo in ka badan 170 waddan.
Codsiga noo ogolaanaya inaan ogaano mar walba xaaladda alaabada, noo soo dirtay digniin marka ay ka hoosayso ugu yar ee aan dejinay, taas oo noo oggolaanaysa inaan si toos ah amarro ugu dirno alaab -qeybiyaha. Waxay kaloo noo oggolaanaysaa inaan falanqaynno dakhliga uu soo saaro shaqaale kasta, si aan u ogaano waqtiga gelitaanka iyo ka bixitaanka shaqadooda, taas oo noo oggolaanaysa inta saacadood ee ay shaqeeyeen dhammaadka bisha.
Intaas waxaa sii dheer, waxay na siisaa a falanqaynta iibka oo buuxa, leh dakhli, isku celcelis, faa'iidooyin, ogow kuwaas oo ah waxyaabaha caanka ah, hel taariikhda tafaariiqda oo dhammaystiran maalmo iyo saacado (taas oo noo oggolaanaysa inaan ogaanno saacadaha ugu xoogga badan ganacsiga) marka lagu daro dhoofinta macluumaadkaas oo dhan kaas oo aan ku dabaqi karno qaaciidooyin kale si aan u ogaano xog kale oo aanu arjigu ina siin.
Sababo la xiriira coronavirus -ka awgiis, qaar badan ayaa ah xarumo baabi'iyay xarafka jirka, iyagoo ku siinaya macluumaadkan lambar QR, meesha macaamiisha ayaa dalban kara amaradooda si aad ugu dirto jikada taleefankaaga.
Camarero 10 wuxuu dhexgalaa amarada lagu soo rogay mareegaha wuxuuna dhexgalaa kan ugu weyn meelihii gaarsiinta cuntada. Codsigu wuxuu diiwaangeliyaa gelitaanka iyo adeegsiga ay sugayayaashu u sameeyaan POS, oo oggolaanaya in la xaddido gelitaanka shaqooyinka qaarkood, waxay muujineysaa khariidad leh qaybinta iyo xaaladda miisaska ...
Numier POS waa bedel kale oo xiise leh oo ay tahay inaan tixgelinno marka aan u helno softiweerka maareynta martigelinta ugu fiican ganacsigeenna. Waad ku mahadsan tahay codsigan, sugeyaashu way awoodaan isticmaal taleefanka casriga ah si aad u dalbato iyo / ama wax -ka -beddelka macaamilka hortiisa, amarro si toos ah ula xiriira miiska.
Codsigan wuxuu noo oggolaanayaa inaan xakameynno mar walba hawlgalka iyo macaashka ganacsigeena, waxaa mahad leh maamulka iibka iyo kharashaadka, dakhliga kaashka ama kaarka, xakamaynta kaydka bakhaarka, qiimaha shaqaalaha, kharashyada korontada, kirada ...
Numier ayaa sidoo kale noo oggolaanaysa amarada wehel ka ah mareegahayaga oo leh aagagga gaarsiinta cuntada iyo / ama ku amro in laga soo qaado xarunta. Waxay sidoo kale noo oggolaanaysaa inaan u abuurno koodh QR macaamiisha si ay xamuulkayaga ugu maraan taleefannadooda casriga ah oo ay ogaadaan macluumaadka xasaasiyadda laakiin ma aha inay amarro bixiyaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Aplicaciones » Waa maxay software -ka maareynta makhaayadda ugu weyn?
PNY XLR8, oo ah ciyaar tartan SSD lagu qiimeeyo [Dib u eegis]